Ulawulo loBukumkani basePortugal
Ubukhosi BasePortugal buxhomekeke kwiPlanethi
IPortugal lizwe elincinci eliseNtshona Yurophu kwinquma elisentshonalanga ye-Peninsula yase-Iberia. Ukususela kuma-1400, amaPutukezi, ekhokelwa ngabaphandi abadumileyo abanjengoBartolomeo Dias kunye neVasco de Gama kwaye baxhaswa yiNkosana uHenry the Navigator , bahamba ngomkhumbi, bahlola, bahlala eMzantsi Melika, e-Afrika nase-Asia. Umbuso wasePortugal, owawusinda kwiminyaka engaphezu kweyesithandathu, wawungowokuqala kwimibuso enkulu yehlabathi laseYurophu.
Izinto zalo zangaphambili zikhoyo ngoku kumazwe angamahlanu kumazwe ngamazwe. IziPhuthukezi zenza iikholoni ngezizathu ezininzi-ukuthengisa iimveliso, igolide, imveliso yezolimo kunye nezinye izixhobo, ukudala iimarike ezininzi zePutukezi iimpahla, ukusasaza ubuKatolika kunye "nokuzenzekelayo" abantu beendawo ezikude. Amakoloni asePortugal azisa ubutyebi obukhulu kweli lizwe elincinci. Ubukhosi buye buthatheka kancane ngenxa yokuba iPortugal yayingenabantu abaneleyo okanye izibonelelo zokugcina amaninzi asemaphandleni. Nazi ezinye izinto ezibalulekileyo zasePutukezi ezibalulekileyo.
I-Brazili yayikude kwi-colon enkulu ePortugal yendawo kunye nabemi. I-Brazili yafikelelwa yiPutukezi ngo-1500. Ngenxa yesivumelwano seTordesillas ngowe-1494, iPortugal yavunyelwa ukuba ikoloni yaseBrazil. AmaPhuthukezi angenisa izigqila zaseAfrika kwaye aziphoqa ukuba zikhule ushukela, ucuba, ikotoni, ikhofi kunye nezinye izityalo zemali. IziPhuthukezi zathatha i-brazilwood kwihlathi elisemgangathweni, esasetyenziselwa ukugqoka iingubo zaseYurophu. IziPhuthukezi zanceda ukuphonononga nokulungisa indawo eninzi yaseBrazil. Ngekhulu le-19, inkundla yasebukhosini yasePortugal yayihlala kwaye ilawula iPortugal neBrazil ukusuka eRio de Janeiro. IBrazil yafumana ukuzimela ngaphandle kwePortugal ngo-1822.
Angola, Mozambique, naseGuinea-Bissau
Kwiminyaka ye-1500, iPortugal yaqulunqa ilizwe langoku entshonalanga ye-Afrika yaseGuinea-Bissau, kunye namazwe amabini aseAfrika ase-Afrika kunye neMozambique. IziPhuthukezi zigqilaza abantu abaninzi bala mazwe kwaye zithumela kwiLizwe elitsha. Igolide kunye neadayimane nazo zachithwa kule mibala.
Ngenkulungwane yeshumi elinamibini, iPortugal yayingaphantsi kweengcinezelo zamazwe ngamazwe ukukhulula iikholoni zayo, kodwa umlawuli wamaPortugal u-Antonio Salazar wenqabile ukudibanisa. Ukuhamba okuzimela ngokuzimeleyo kule mihlaba emithathu yase-Afrika kwavela kwiMfazwe yamaPortugal yamaKhosi kuma-1960s nakwa-1970, eyabulala amawaka amawaka kwaye yahlanganiswa ne-communism kunye neMfazwe yeCold. Ngowe-1974, umkhosi wamapolisa ePortugal wagxotha uSalazar amandla, kwaye urhulumente omtsha wasePortugal wagqiba imfazwe engathandekiyo, ebiza kakhulu. I-Angola, iMozambique kunye neGuinea-Bissau bathola ukuzimela ngo-1975. Wonke amazwe amathathu ayengaphili, kwaye iimfazwe zemihla eminyaka emva kokuzimela zathatha izigidi zabantu. Izigidi ezigidi zabantu abavela kulo mazwe amathathu bathabathela ePortugal emva kokuzimela kwaye bahlula uqoqosho lwasePortugal.
ECape Verde, eSao Tome kunye neNqununu
I-Cape Verde neSao Tome kunye ne-Principe, ezimbini ezincinci ezinxweme ezikulo lonxweme olusentshonalanga ye-Afrika, nazo zagqitywa yiPutukezi. Abazange bahlali phambi kokuba isiPutukezi sifike. Bebalulekile kwizorhwebo lekhoboka. Bobabili bafumana ukuzimela ngaphandle kwePortugal ngo-1975.
Kwi-1500s, isiPutukezi saqulunqa ummandla waseNdiya we-Goa osentshonalanga. I-Goa, eLwandle lwaseArabhiya, ibingumthombo obalulekileyo kwiIndiya ezicebileyo. Ngowe-1961, i-Indiya inamathele i-Goa evela kwisiPutukezi kwaye yaba ngummandla wase-Indiya. I-Goa inamalungu amaninzi amaKatolika ngokuyinhloko kumaNdiya aseHindu.
IziPhuthukezi zaziqhelanisa nesiqingatha sempuma yesiqithi saseTimor ngekhulu le-16. Ngowe-1975, i-East Timor yachaza ukuzimela ngaphandle kwePortugal, kodwa isiqithi sahlaselwa saza sahlonywa yi-Indonesia. I-East Timor yazimelela ngo-2002.
Ngenkulungwane ye-16, isiPutukezi saqhawula iMacau, esiseLwandle lwaseChina. I-Macau yayikhonkco ebalulekileyo yeSouth-Asia. Ubukhosi basePortugal buphela xa iPortugal yanikela ukulawula kukaMacau eChina ngo-1999.
Ulwimi lwesiPutukezi namhlanje
IsiPutukezi, ulwimi lwaseRomania, ngoku luthethwa ngabantu abayizigidi ezingama-240. Yayesithandathu elona luthetha ulwimi jikelele. Ulwimi olusemthethweni lwasePortugal, eBrazil, e-Angola, eMozambique, eGuinea-Bissau, eKapa Verde, eSao Tome nase-Principe naseMpuma Timor. Kwakhona kuthethwa kuMacau naseGoa. Ngolunye lweelwimi ezisemthethweni zeYurophu yeYurophu, i-African Union kunye noMbutho weMerika yaseMelika. EBrazil, abantu abangaphezu kwezigidi ezili-190, lizwe elithetha ulwimi lwesiPutukezi kwihlabathi. IsiPutukezi sithethwa kwiiAzores Islands kunye neDiraira Islands, ezimbini ze-archipelagos ezisePortugal.
Umbuso wasePortugal waseMzenteni
IziPhuthukezi zixhomekeke ekuhloliseni nasekuhwebeni ngeenkulungwane. Ama-colonies asePortugal ayengaphambili, asasazeka kwiilizwekazi, anemihlaba ehlukeneyo, abantu, iindawo zokuhlala, iimbali kunye neenkcubeko. IziPhuthukezi zathintela kakhulu iikholeji zabo kwezopolitiko, kwezoqoqosho, nakwentlalo, kwaye ngamanye amaxesha, ukungabi nabulungisa kunye nentlekele kwenzeka. Ubukhosi bugxeka ngenxa yokuxhaphaza, ukunyaniseka kunye nobuhlanga. Ezinye iikholoni zihlala zihlupheke kakhulu kwiindawo ezihlwempuzekileyo kunye nokungazinzi, kodwa ezo zixhobo zendalo ezixabisekileyo, ezidibanisene nolwalamano lwama-diplomatic kunye noluncedo lwasePortugal, luya kuphucula imeko yokuphila kwezi mazwe amaninzi. Ulwimi lwesiPutukezi luya kuhlala luba ngumbonakaliso obalulekileyo bala mazwe kunye nesikhumbuzo sokuba ubukhulu bobukhosi bukaPutukezi bekunye.
Isoftware esebenzayo kwiShishini loThutho lukaRhulumente: Hastus nguGIRO
Nwabe mnandi uMatshi ukubhala ukulungiselela ukuhamba